Muxuu daaran yahay Cabaadka Feysal Cali Waraabe ??.WD. Qurba-joogta DDSI ee shanta qaaradood. – Idil News
Muxuu daaran yahay Cabaadka Feysal Cali Waraabe ??.WD. Qurba-joogta DDSI ee shanta qaaradood.
Muxuu daaran yahay Cabaadka Feysal Cali Waraabe ??
Feysal oo aynu ku naqaano shaqsi maangaab ah oo aan laheyn garasho fog ayna madax martay caadhifad qabiil ayaa waayadan dambe ku mashquulay wax ka sheega Maamulkeena suuban,isagoo iloowsan waxa uu hadal hayo inuu yahay dal kale oo horrumar ku tallaabsaday,halka ay S.N.M.ku fashilantay iney maareeyso shacabkeeda. Kolka aan u soo noqono cabaadkiisa iyo waxa uu ku andacoonayo waa waxba kama jiraan (False accusation), oo waa laga dhex-hadlayaa,waxaana ka dhex hadlaya dhagarqabayaashii S.N.M. ee uu madaxda uu yahay odaygan asaasaqay ee Siilaanyo, oo xusuustii iyo garashadiiba ka tagtay ee aan labo kelmadood u sheegi karin shacabkiisa ee garbaha la hayo sida Xabiib Bourguibahii Tunisia iyo korneelada ka agdhow. Haddaba jawaabteena waxey ku socotaa qolyihiina Feysal remote controlka ku hoggaaminaya.
Kolkey taariikhdu aheyd 5-6-2016 waxey ciidamada ammaanka ee DDSI iyo kuwa Federaalka Ethiopia ay fashiliyeen shirqool Hargeysa laga soo maleegay, lagana warhayey;kaasoo ay soo wada maleegeen saraakiil Masaari ah,Maxamad Xasan Xaad & Muuse Biixi. Waxaa markiiba soo qaatay oo shirqoolka qeyb ka ahaa HCTV oo ka dhigay xasuuq shacab oo ka dhacay deegaanka Jaamac Dubbad Degmada Gaashaamo gobolka Jarar ee DDSI,waxaa isna xasuuq u fasiray calooshiisa u shaqeyste Cabdimaalik Coldoon.
Cabdimaalik Coldoon ayaa soo bandhigay Haweenay magaceedu u ku sheegay Ifraax Jaamac Maxamuud-Weyne oo Burco ka tagtay markay maqashey in halkaas lagu dilay hooyadeed Hibo Haaruun Bariisle iyo walaasheed Caasha-Qadan. Ifrax waxey sheegtay iney xuduuda ka gudubtay oo ay gaartay deegaanka Jaamac Dubbad ee degmada Gaashaamo,HCTV wuxuu sheegay iney xuduuda gebi ahaanba xiran tahay bal arrinkaasi qolyihiina is waafajiya!!!!!!!!!
caddeynta keliya ee la soo bandhigay waa wiil yar oo ay laabta kaga taal dab iyo lowga mig hoostiisa 2 dab;tan laabta haddeey rasaas tahay xaggeey ka baxday? nabarka muuqda waa qiyaastii 15 cisho ka hor,ma´aha 5 cisho ka hor.
Waxaa xarunta dhexe Maamulka fashilan ee S.N.M.lagu qabtay shir deg-deg ah oo daba socda warbixintii uu soo bandhigay Coldoon waxaana u soo baxday ineysan ku fileyneyn. Waxaa loo xilsaaray inuu arrinkaasii ka hadlo Feysal Cali Dhurwaa. Feysal ayaa si caro leh u yiri dad asalkooda kasoo jeedo Somaliland ayaa Jaamac Dubbad lagu xasuuqay,Feysal caddeyn la kaalay dadka aad sheegayso Magacyadooda oo saddexan iyo halka ay visaha kasoo qaateen,ma immigrationka wajaale ayey kasoo gudbeen? jawaab baa lagaa rabaa.Waxaa sidoo kale qadiyadda Jaamac Dubbad loo xilsaaray Xuseen Cali Ducaale(Ambassador Cawil) iyo Aw-khaliil iney Nairobi tagaan oo ay dacwad u gudbiyaan heyadaha Amnesty International & Human Rights Watch,waxoogaa dhaqaale ayaa faraqa loogu shubay,caddeynta ay la shirtagayaana waa videoyga Coldoon.
Ambassador Cawil & Aw-Khaliil waxey gaareen Nairobi waxey meereystaanba waxey is heleen oo ay la heshiiyeen nin baare u ah Human Rights Watch magaciisuna yahay Felix Horne,kaasoo wax ka diyaariyey cajaladdii Coldoon qoraalna kasoo saaray.Wuxuu qaanuunka caalamiga qabaa markuu qof ku soo ogo dacwad qof kale fal dembiyeed in la tago goobta u faldembiyeedku ka dhacay lana helo marqaatiyo ku filan. Kol haddaan shuruudahaas la helin,qoraalkasta oo ka soo baxa HRW waa aragti u gaar ah shaqsiyadda Felix Horne.
EEG LIFAAQA WARBIXINTA HRW : https://www.hrw.org/news/2017/04/05/ethiopia-no-justice-somali-region-killings
Kolkaan u soo noqono Ambassador Cawil beenaale qadiyadda Jaamac Dubbad 2 qoraal ayuu toddobaad gudihiisa soo bandhigay,qoraalkiisa hore wuxuu isugu jirey faan iyo hanjabaad,qoraalka dambe ayuu qoraalkiisa hore ku beeniyey. Cawilow qoraalkaaga waa kii hore ha ka noqon oo raganimadaad ku qortay yeelo, oo waxaad hayso soo daa.
Aw-Khaliil tan iyo xasuuqii Yocaale waad xiiqsantahay oo mu´aamarado ayaad maleegeysey,waxaad aag aragagixiso ka furtay Dhadhaab,Gaarissa & Nairobi waanu kula soconaa,waxaa horey loo yiri i arkaay—— i arkay—– i qariyaay—— i qariyaay baa ka dambeyn. Ambassador Cawil iyo Aw-Khaliil waxaa kale loo xilsaaray iney qurbajoogtooda kiciyaan oo lagu mudaaharaado Safaaradaha Ethiopia ee Europe & Mareykan iyagoo sita calanka Ethiopia,loona tuso caalamka iney Ethiopia ka jirto cabburin iyo xasuuq.
Waxaa boqosho ku tagay Gaashaamo wafdi uu hoggaaminayo Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uuna ka mid ahaa Ra´iisal wasaare Hailemariam Desalegn,ujeedka booqashadoodu ayaa aheyd qiimeyn abaarta ka jirta aagaas iyo dadka ka soo hayaamay gobolada fog kana soo gudbay xadka ay Ethiopia la wadaagto Soomaaliya,ujeedka booqashada ayaa aheyd in indhaha caalamka la tuso baaxadda abaarta jirta si ay beesha caalamka uga qeyb qaataan masiibadan ku habsatay shacbkan soo hayaamay ee dhibaateysan.
Saddex maalmood kaddib booqashada gurmadka aheyd ee Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu ku tagay Gaashaamo,waxaa shir jaraaiid ku qabtay Hargeysa Feysal Cali Dhurwaa wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay dadkeenii ku dhashay Ethiopia ayaa teesaraha laga jeexjeexaya. Jaalle Feysal ereyga teesaro xaggeena kama shaqeeyo,warqadda aqoonsiga Ethiopia magac bey leedahaye soo baro. Ereyga ah daaqsin baad ku timaadeen waa run oo waa xaqiiq dhab ah waxaad dalkeena ku timaadeen : Anglo-Ethiopian grazing agreement 29 november 1954 ,heshiiskaas oo ka dhacay Wasaaradda arrimaha dibadda UK London,waxaa UK u saxiixay Anthony Eden oo ahaa xoghayaha arrimaha dibadda UK,halka uu Ethiopia u saxiixay Aklilu Habte-wold oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia.
Kolkaan u soo noqono shirkii London ee looga hadlayey Gobanimada British protectorate of Somalilanad ee(Somaliland Constitutional Conference May 1960) ee dhex maray wafdigii uu hoggaaminayay Maxamad xaaji Ibraahim Cigaal oo ay ka mid ahaayeen Cali Garaad Jaamac,Xaaji Ibraahim Nuur & Axmed Xaaji Ducaale Keyse.
waxaa ka mid ahaa qodobadii shirkaasi lagu soo bandhigay,heshiiskii daaqsinta ee Anglo-Ethiopian grazing agreement ka eeg bogga 5aad,qodobka 14aad,qodobkaas dowladda UK waxey ku tiri wafdigii Cigaal kala hadla Ethiopia.Wafdigii Cigaal Addis-ababa ayey ka deggeen isla bishi May 1960 waxeyna la kulmeen Boqor Haile Selassie,wuxuuna ku yiri Ethiopia waxey la gashay heshiiska daaqsinta UK, haddaba UK kolkaad xorriyadda ka qaadataan Koonfur Soomaaliya ayaad la midoobeysaan 1-da July ayaga daaqsin u doonta. Heshiiskii daaqsinta ee UK & Ethiopia ayaa 1-da July 1960kii gablamay. Waxaa xigey xilligii Dergiga ee aad deegaankeena qaxootinimada ku timaadeen oo ay maanta hayadda qaxootiga qaranka Ehtiopia hayso kaararkiii qaxootinimo oo leh sawirka farahiina(fingerprint),midna xisaabta ku darsada Ethiopia malafkeedu ma lumo. Maanta oo aad biyo & Qammandi doon tihiin.
DORRAAD DAAQSIN + SHALEY QAXOOTI + MAANTA BIYO & QAMMANDI = JAALLE SIDAAS MUWAADIN LAGUMA NOQDO.
Ogaada xaggeena dulqaadkii wuu kasoo idlaaday oo waxaad gebi ahaanba diirateen deegaankeenii oo aan maanta geed ku harin ilaa iyo 3000,000(saddex milyan) oo hectar ayaa isu beddelay lamadegaan,Khasaaraha maaliyadeed waa in ka badan 6000.000.000(6 bilyan) US$. Abwaan hore ayaa laga hayaa waxey nabadeen waxey na bareen baa ka daran, waxaad na barteen dhaqankan xun ee ah: Tahriib,Tacabur,Magafe waa dhaqan baas oo aad noo soo gudbiseen. Waxaa la idinku celin dalkiina,xuduudana waa tii xilligii Boqor Haile Selassie iyo mustacmarkii Ingiriis waana muqaddas.
AF-URUR PUNTLAND 8-6-2017
Waxey argagixisadu Al-qushaash weerar ku qaadeen deegaanka Af-urur oo 70 km u jirta Bosaaso, waxeyna ku laayeen in ka badan 70 qof oo u badan birmageydo:carruur,haween & waayeel,shirqoolkaas waxaa laga soo abaabulay xarunta tababarka ee Al-qushaash ee deegaanka Beer bariga Burco,waxaana qorshahaasi lahaa oo soo ambabixiyey kooxda argagixisada ah, wadaadka mayalka adag ee Sheekh Cali Warsame oo ah Hoggaamiyaha Ruuxiga ah ee Al-qushaash.
Afar cisho kaddib weerarkii Al-qushaash ee degaanka Af-urur waxaa shir jaraa´id ku qabtay Hargeysa Feysal Cali Dhurwaa,wuxuuna yiri dadkeena u safraya Ethiopia xuduuda Wajaale ayaa lagu baaraa. Feysalow waa qaanuun Caalami ah in xuduudaha laba waddan oo deris ah in socotada lagu baaro,sidoo kale Madaarada Caalamiga ah waa la mid.Hadalkaaga waaxaa ka muuqata inaad ka ciil qabtid sidaanu dalkeena u ilaashano,oo aad dooneyseen iney Al-qushaashta Burco ay meel dagan oo beylah ah naga helaan oo ay u sahlanaato iney na gummaadaan. Hadalkaaga waa digniin culus oo ma dhaylsaneyno,socotada xagga Wajaale naga soo gasha waa la baari oo dharkaa laga dhigi oo waa la qaawin.
Waxaad tiri Ethiopia waxaa naga soo gala khaad,khamri,khudrad & Khurun ma xoolaheena nool ee maxjarada dhowrka ah aad u dhisateen miyaa saaka khurun noqday? Waxaad kaloo tiri kililka 5aad waa Soomaaliweyn haddaba baro magaceenu kilil 5aad maaha,howd maaha,reserve area maaha ee waa DOWLAD DEEGAANKA SOOMAALIDA ITOOBIYA (DDSI).
Dagaalkii labaad kolkuu dhammaaday Ingiriis wuxuu gacanta ku dhigay deegaanada ay degto Soomaalida marka laga reebo Jabuuti,haddaba ereyga Soomaaliweyn idinkaa fikradeeda lahaa oo dawladda Ingiriiska ula tegey 1946, xilligaas oo uu ujeedkiinu ahaa inaad ku dhaxashaan dhulkeena qaniga ah ee daaqsinta ku fiican. Xoghayihii arrimaha dibadda ee Ingiriiska Ernest Bevin oo fikradiina la dhacsanaa ayaa wafdi sare u soo diray deegaankeena waxaa lagu shiray deegaanka barakeysan ee KELI,saddex maalmood oo shir ah ayaa la isku mari waayeey. Doodu waxey u dhacday sidan: ergadii Ingiriiska ka socotay ayaa tiri waxaanu jecelnahay idinkoo ka mid ah Soomaaliweyn inaan idin gaarsiino dowladnimo;odayadeenii ayaa ku yiri wafdigii Ingiriiska ahaa goormeynu heshiiney waa taad na gummaadeen bal marka hore qirta oo garaawshiyo ka bixiya,dabadeedna magtii keena.
Ingiriis wuu ka meermeeray inuu qirto gummaadkii dhacay,ugu dambeyn odayadeeni ayaa ku yiri intaan adiga oo cadow ah ku raaci laheyn waxaanu raaceynaa oo aanu la midoobeynaa walaaladeen Ethiopia oo dowlad ah;ugu dambeyn waxaanu la midownay Ethiopia 24-7-1948. Waxaa illaah mahaddii ah odayadeeni xilligaas noolaa ee talada hayey ineyba sii ogaayeen cirib xumadiina. Jaalle Feysal Soomaaaliweyn Ingiriis baanu ka diidnay 1946 maanta Hargeysa kaa yeeli meyno haddaad idinku xiiso u qabtaan Xamar u doonta.
Waxaa shir jaraaid ku qabtay Hargeysa Jaalle Feysal wuxuu si caro leh u yiri waa in xuduudka laga xiraa Ethiopia oo waa tan xoolihii joojisay,ganacsatadeenii wajaale ee koontrabaanka waa taa xadka ka xiratay. Xoolaha nool waa hantideena oo muddo dheer beylah ahaa,maanta tacab badan baanu gelinay sida mashaariicda, naaxinta,maxjarada,warshadaha hilibka;suuqyada caalamka ayaanu toos u geynaa,waanu ka xorownay suuqii aad ula baxdeen doqon ma waayo iyo mashruucii macalqabad. Ganacsigiina sifo sharci ah ayuu xadkeena kaga soo gudbi karaa,oo aanu ka wadno maxaad soo saartaan oo aan xaggeena oolin?
Daawo tayo leh warshadaha Ethiopia ayaa soo saara,bariiska kan Godey & Gambella kasoo go´ay baanu dhoof u rabnaa ,Saliida cuntada, cementada, sokorta,dharka,kabaha,maacuunta,saabuunta,intaas oo badeecado ah oo waddani ah oo tayo leh baanu haysanaa. Eega diyaar uma nihiin Baariiskaan plastika ah ee Indhodeero & Dahabshiil ay china kasoo waarideen,xadkeena kama soo gudbayo riyadaas maankiina ka saara. Kalluun & Milix waa waxaa keliya aad sheegataan inaad leediyihiin waa run,laakiin baddiinu wey aafeysantahay waa tii Ruushka berigii uu saldhiggu ku lahaa Berbera waa tuu ku aasay haraadiga sunta Nuklearka, maanta Lowycaddo,Bulloxaar,Berbera ilaa Xiis waa meelaha caalamka ugu khatarsan xagga radioactive-ka. Haddaba kalluunkiina iyo milixdiina beladeeda iyo aafadeeda isku fileysiiya.
Dhammaad La soco Qaybta 3-aad
Waxaa diyaariyey. Qurba-joogta DDSI ee shanta qaaradood.